Soosaaraha ugu fiican & soosaarka budada Magnesium L-threonate
Cofttek waa soosaaraha ugu fiican ee Magnesium L-threonate ee Shiinaha. Warshadeena waxay leedahay nidaam maareyn wax soo saar oo dhameystiran (ISO9001 & ISO14001), oo leh awood wax soo saar bille ah 3300kg.
Magnesium L-threonate budada (778571-57-6) fiidiyaha
Budada Magnesium L-threonate Smamnuucista
Qaaciddada Molecular: C8H14MgO10
Miisaanka kelli: 294.495 g / mol
Magaca kiimikada: Magnesium (2R, 3S) -2,3,4-trihydroxybutanoate
micne ah: Magnesium L-Threonate
Furaha gudaha: YVJOHOWNFPQSPP-BALCVSAKSA-L
Codsiga: Magnesium L-Threonate waa nooca ugu badan ee loo qaadan karo Kiniinada Magnesium. Waxaa loo isticmaalaa in lagu wanaajiyo xusuusta, kaalmaynta hurdada, iyo in kor loogu qaado shaqada garashada guud.
Budada Magnesium L-threonate (778571-57-6) NMR Spectrum
Magnesium, sida aan ognahay waa macdan weyn, aad iyo aad muhiim ugu ah caafimaadka - badiyaa maskaxda iyo hab -dhiska neerfaheena oo dhan. Magnesium-cation a baahsan (ion si togan loo soo oogay), ayaa aad muhiim ugu ah sameynta habboon ee wareegyada neuronal-ka maadaama ay ku xidhan tahay soo-dhoweeyeyaasha neerfaha Waxaa loo aqoonsaday aasaas ahaan si loo yareeyo walaaca, niyad -jabka iyo arrimaha neerfaha. Goobta daawada ee shaqaysa, inta badan khubarada caafimaadku waxay dareemaan baahida loo qabo magnesium kaamil ah oo loogu talagalay bukaannadooda dhaqamadooda. Gunnada Cunnada ee hadda lagu taliyay ee magnesium waa inta u dhaxaysa 300 iyo 420 miligram/maalintii dadka intiisa badan, sida caadiga ah waxaa laga helaa cuntada. Si kastaba ha ahaatee, qiyaasta celceliska looga baahan yahay (EAR) ee magnesium lagama helo cuntada. Tirakoob cabsi leh ayaa jira. Tani waxay aakhirka keentaa yaraanta magnesium taas oo sababi karta arrimo caafimaad oo halis ah sida dhaawaca maskaxda maskaxda, xanuunnada neerfaha, cudurada Parkinson iyo Alzheimer, madax xanuun, cadaadis, dhaawac maskaxeed, suuxdin, iyo xaalado la xiriira. Taasi waa meesha qaabab kala duwan oo ah kaalshiyamka dheeraadka ah ay soo galaan sawirka. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira dhibaato ku xeeran adeegsiga magnesium oo loo heli karo kaabayaasha dhibaatooyinka caafimaadka maskaxda iyo maskaxda - uma muuqdaan inay si fudud maskaxda ku galaan. Qaabka kacaanka ee magnesium-Magnesium l-threonate, waxay umuuqataa inay caawineyso halkan.
Muujintii-Magnesium L-Threonate budada
Dheeraadka magnesium ee caadiga ah ee la heli karo ayaa loo qoondeeyay in si fiican loo nuugo iyo sidoo kale Magnesium I-threonate. Tan waxaa lagu gaaraa isku xirnaan ka wanaagsan maaddooyinka magnesium oo gacan ka geysta hagaajinta xasilloonida, heerka nuugista iyo waxtarka. Magnesium I-threonate waa qaabka ugu dambeeyay ee magnesium. Koox dhakhaatiirta neerfaha ka tirsan oo ka tirsan Machadka Teknolojiyadda Massachusetts iyo Jaamacadda Tsinghua ee Beijing waxay soo saareen Magnesium I-threonate oo la isku daray magnesium iyo I-threonate, dheef-shiid kiimikaad ah vitamin C. dhamaystirid si fudud ayuu u dhex maraa shaandhada difaaca ee maskaxda si uu u gaaro meesha uu u baahan yahay. Magnesium I-threonate oo aan dabiici ahayn waa wax yar maadaama faa'iidadiisu ay aad u weyn tahay.
Si dabiici ah ayaa looga heli karaa cusbada Epsom, Magnesium sulphate si fudud jidhku uma nuugo sidaa darteedna wuxuu leeyahay waxyeelo. Isku-darka threonic acid iyo magnesium, Magnesium I-threonate waxaa loo sameeyaa cusbo si sahlan maskaxda ugu gudbi karta dhiigga. Horaantii tan waxaa lagu gaari karaa oo keliya dhalmada xididka. Sida laga soo xigtay cilmibaarista xayawaanka tani sidoo kale waa habka ugu wax ku oolka badan ee u horseedi kara magnesium unugyada maskaxda.
Dheeraadkan Magnesium I-threonate waxay cadeeyeen inay yihiin ilaha ugu waxtarka badan si ay u taageeraan shaqaynta garashada iyo sameynta qoyska nootropics oo ay weheliso daawooyinka dhakhtarku qoro.
Magnesium I-threonate oo shaqeyneysa
Cuntada casriga ah waxaa ka maqan magnesium iyo weliba, daawooyinka sida caadiga ah la heli karo ayaa sii qallajiya heerka magnesium. Dalal badan oo ay ku jirto Mareykanka, in ka yar 50% dadku waxay la kulmaan qaadashada maalinlaha ah ama gunnada (RDA) ee magnesium. In kasta oo maskaxdu u baahan tahay xaddi badan oo magnesium ah, haddana xoogga ugu badan ayaa ku jira dhiigga.
Magnesium waxay udub dhexaad u tahay shaqooyin badan oo neerfaha ah iyo xaalado ay ka mid yihiin:
Dhaawac weyn ama dhaawac maskaxeed
Suuxdimaha iyo Schizophrenia
Waxaa la yaab leh ma jirto xad ku filan oo magnesium ah oo ku dhammaata gobolka maskaxda, xaddidna waxtarkeeda. Tani waa halka kaabista Magnesium l-threonate ay lagama maarmaan noqoto si loo buuxiyo ku filnaan la'aanta magnesium, gaar ahaan marka dadka aan cunin magnesium ku filan iyada oo loo marayo ilaha cuntada ay muujiyaan xaalad neerfaha oo hoos u dhacday iyo astaamaha la xiriira.
Ku-shaqaynta Magnesium l-threonate
Waxay dhex martaa si ay u gaarto aagga saxda ah ee maskaxda, halkaas oo loo baahan yahay bixinta magnesium.
Waxay hagaajisaa awoodda maskaxda ee hore u marinta iyo kobcinta taas oo ka caawisa miyirka iyo barashada inay dhacaan.
Waxay ka caawisaa in la kobciyo horumarinta unugyada maskaxda cusub.
Faa'iidooyinka budada Magnesium I-threonate
Magnesium waxay leedahay faa'iidooyin caafimaad oo badan. Qaadashada saamiga saxda ah, waxaa lagu yaqaanaa inay sare u qaaddo niyadda, kor u qaaddo adkeysiga si ay ula qabsato walaaca, kor u qaaddo awoodda fiirsashada iyo diiradda, kor u qaadidda tamarta iyo hagaajinta tayada hurdada. Waxa kale oo ay tirtirtaa ceeryaanta maskaxda subaxda (xaalad jahawareer, xusuusta oo liidata, iyo feejignaan la'aan iyo diirad saarid iyo cadayn maskaxeed) - calaamad caadi ah oo leh Vestibular Migraine
Awoodda maskaxeed ee isbeddelka waa neuroplasticity (oo sidoo kale loo yaqaanno baaxadda neural, ama baaxadda maskaxda). Dabacsanaantani waxay xaqiijinaysaa in maskaxdu awood u leedahay inay abuurto isku -xidhyo cusub oo neerfaha ah (isgoysyada neuronal) waxayna saamaysaa barashada, xusuusta, dabeecadda, iyo hawlaha garashada guud. Ballaarnaanta maskaxdu waxay kaalin muhiim ah ka qaadataa geedi socodka gabowga ee maskaxda, iyadoo luminta caaggu ay keento luminta shaqada garashada. Cilmi -baarista neuroplasticity -ka ama baaxadda maskaxda ayaa sii kordheysa oo khubarada caafimaadka iyo saynisyahannadu waxay ogaanayaan in kordhinta heerarka magnesium unugyada neuronal ay sare u qaadi karto cufnaanta synapse iyo baaxadda, hagaajinta shaqada guud ee garashada. Waxay sidoo kale muujineysaa natiijooyin rajo leh si ay gacan uga geysato “dib -u -kicinta” maskaxda marka ay dhacaan dhaawacyada maskaxda iyo arrimaha caafimaadka maskaxda. Dheeraad kasta oo magnesium ah ayaa laga yaabaa inaanay waxtar u lahayn wax ka qabashada arrinta-Magnesium l-threonate ayaa la sheegay inay ka gudubto caqabad-maskaxda si ay si wax ku ool ah sare ugu qaaddo heerarka magnesium ee maskaxda.
Intaa waxaa dheer, waxay kaloo leedahay faa'iidooyin caafimaad oo kale oo ay ka mid yihiin iska caabinta neefta, casiraad muruqyada ah, xoojinta nidaamka difaaca, BP -ga sare, lafo -beelka iyo xaaladaha wadnaha.
Magnesium l -threonate waxay leedahay saameyn nasasho leh, waxay dejisaa neerfayaasha waxayna ka caawisaa ka hortagga iyo yareynta suuxdinta iyo arrimaha kale ee la xiriira dareemayaasha.
Magnesim l-threonate waxay xoojisaa lafaha iyadoo kor u qaadeysa cufnaanta lafaha, waxay yareysaa bararka, waxay hagaajisaa tayada hurdada waxayna nadiifisaa mareenka dheefshiidka.
Magnesium I-threonate waa badeecad cusub oo markaa sidaa darteed ma laha caddeyn muddo dheer ah isticmaalkeeda. Tani waxay kordhineysaa muhiimadda cilmi -baarista dhabta ah xitaa in ka badan. Tijaabo caafimaad oo la sameeyay waxay haysaa walax lagu kalsoonaan karo.
Tijaabada caafimaad ee Magnesium I-threonate
Joornaal caafimaad oo la daabacay ayaa bixiyay xoogaa aragtiyo xiiso leh iyo faa'iidooyinka caafimaad ee Magnesium I-threonate. Koox cilmibaaris oo ka kooban dad waayeel ah oo leh xaalado fiirsasho, xusuus, xanuun hurdo iyo welwel ayaa lagu calaamadeeyay 4 waji oo kala duwan - xusuusta shaqaysa, xusuusta hoosaysa, diiradda iyo hawlaha fulinta. Tani waxay ka koobnayd xirfado badan oo caawiya samaynta yoolal, qorsheyn iyo fulin. Mawduucyada waxaa lagu maamulay Magnesium I-threonate 3 bilood oo xiriir ah waxaana sidii la filayay la aqoonsaday in heerka magnesium uu aad u kordhay. Tani waxay dhalisay in mawduuca uu ka hawlgalo dhammaan afarta qaybood ee imtixaannada. Waxa kale oo ay keentay in la yareeyo da'da maskaxda noolaha. Si kale haddii loo dhigo, maaddooyinkaan waxay ku koreen ku dhawaad ​​10 sano da'da maskaxdooda. Si kastaba ha noqotee, Magnesium I-threonate wax yar bay ka taraysay hagaajinta hurdada, kor u qaadista niyadda ama yareynta walaaca arrintaas.
Baro xayawaanka loogu talagalay budada Magnesium I-threonate
Daraasado lagu sameeyay xayawaanka loogu talagalay Magnesium I-threonate waxay heleen xoogaa natiijooyin xiiso leh.
Dhibaatada walwalka iyo ka-hortagga Magnesium I-threonate
Magnesium I-threonate waa qaab sare oo magnesium ah oo u shaqeeya sidii dabciye dabiici ah waxayna ku shaqaysaa dhimista hormoonnada walaaca, kordhinta dejinta neurotransmitter GABA halkii. Waxay kaloo caawisaa ka hortagga kiimikooyinka walaaca ee maskaxda galaya. Tijaabinta Magnesium I-threonate ee xayawaanka ayaa caddeysay inay u noqon karto xannibaad caawinta xannuunnada welwelka, cuqdadda caadiga ah iyo jirrada ka dib.
Magnesium I-threonate iyo Alzheimer iyo Dementia
Magnesium I-threonate ayaa sidoo kale loo yaqaanaa in lagu daaweeyo asaasaqa iyo cudurka Alzheimers sidoo kale. Jiirka iyo jiirka ayaa loo isticmaalay cilmi baarista cudurka Alzheimers maadaama xusuustooda iyo kobcinta maskaxdu ay la mid tahay tan aadanaha. Magnesium I-threonate ayaa la ogaaday inay ka caawiso baabi'inta xusuusta iyo hoos u dhaca maskaxda ee jiirka.
Waxaa jira xiriir la ogyahay oo u dhexeeya heerka magnesium oo hoos u dhacay iyo xusuusta oo luntay. Heerarka magnesium ee kordhay ee cuntada waxay si weyn u keenaan asaasaqa. Cilmi -baaristu waxay rajo ka qabtaa qaar badan oo ka mid ah faa'iidooyinka neuroprotective -ka ee lagu tijaabiyay jiirka kuwaas oo muujinaya suurtagalnimada in lagu daweeyo cudurka Alzheimers ee dadka.
Magnesium I-threonate oo ka soo horjeeda barashada iyo xifdinta
Jiirka marka lagu maamulo Magnesium I-threonate ayaa ka dhigay kuwo caqli badan. Waxay muujiyeen rabitaan inay wax bartaan oo ay hagaajiyaan shaqada, marka lagu daro xusuusta gaaban iyo tan fog.
Caddaymaha iyo taageerada Magnesium Threonate
Cilmi -baaris bilow ah oo ku saabsan Magnesium threonate ayaa muujisay; dayactirka koromosoomyada waxyeelloobay, kordhinta heerka magnesium ee maskaxda marka la barbardhigo noocyada kale ee magnesium, ka shaqeynta aagga xusuusta oo ka sarreeya dhammaan dib-u-habeynta xusuusta muddada-gaaban. Marka la cuno magnesium nooc kasta oo jirka ka mid ah, waxaa la filayaa inay qabato hawlo badan oo ay ka mid yihiin shaqooyinka muruqa, sameynta borotiinno iyo asiidh dufan, firfircoonaanta fiitamiinada B, xinjirowga dhiigga, soo -saaridda insulinta, iyo sameynta ATP. Intaa waxaa dheer, magnesium wuxuu u dhaqmaa sidii kiciyaha enzymes kala duwan ee jirka oo dhan. Waxay kaloo ka caawisaa dhisidda nidaamka difaaca.
Xulashada Magnesium I-threonate supplements
Hubi inaad si taxaddar leh u fiiriso summadaha si aad u hubiso in kaabista ay ku jirto Magnesium I-threonate.
Qiyaasta lagu taliyay ee budada Magnesium I-threonate
Qaadashada caadiga ah ee magnesium ee ragga waa 420 miligram dumarkana waa 320 miligram. Si kastaba ha ahaatee, tani way kala duwanaan kartaa iyadoo ku xiran da'da. Ma jiro wax si gaar ah loogu taliyay in la qaato Magnesium I-threonate. In kasta oo 1500 ilaa 2000 miligram maalintii ay tahay inay noqoto hab wanaagsan oo loogu talagalay faa'iidooyinka garashada ee wax ku oolka ah. Tusaalaha caadiga ah ee iibiyaha ugu fiican waa Magtein oo loo sharciyeeyay Magnesium I-threonate kaas oo lagu tijaabiyay xayawaanka sidoo kale. Waxay ka kooban tahay qaabab adag iyadoo la adeegsanayo kaabayaal waxtar leh.
Qiyaasta lagu taliyey ee Magnesium I-threonate waa:
Carruurta ka yar saddex iyo toban sano-80-240 milligram/maalin
Dumarka ka weyn afar iyo toban sano -300 -360 milligram/maalin
Ragga ka weyn afar iyo toban sano-400-420 miligram/maalintii
Haweenka uurka leh/ kalkaaliyayaasha ah: 310-400 miligram/ maalintii
In kasta oo ay tani u ekaan karto qiyaas badan, maskaxda ku hay in jajab kaliya la nuugo. Marka, 2,000 miligram oo Magnesium l-threonate ayaa kaliya bixin doonta qiyaastii 144 miligram oo ah magnesium elemental, oo qiyaastii saddex meelood meel ah Gunnada Cunnada ee lagu taliyey ee magnesium.
Sababaha tixgelinta ilaha badan ee magnesium
Ma jiraan wax kaa horjoogsanaya inaad tixgeliso qaabab badan oo magnesium sida glycinate magnesium, citrate ama gluconate. Waxaa jira qaabab badan oo laga heli karo miiska dushiisa si loogu qaato magnesium. Calaamadda lagu garto qaadashada magnesium ee ku filan waa saxaro dabacsan waxayna u adeegtaa sida calaamad cas.
Mudo intee le'eg ayay qaadataa Magnesium l-threonate inay shaqeyso?
Magnesium l-threonate oo afka laga cunay ayaa la sheegay inay qaadato ugu yaraan hal bil si loo kordhiyo heerarka magnesium maskaxda illaa heerarka loo baahan yahay halkaas oo ay wax uga qaban karto xanuunnada maskaxda qaarkood, sida niyad-jabka, welwelka iyo lumitaanka xusuusta da'da la xiriirta oo saameyn weyn ku leh xusuusta samaysashada iyo shaqaynta maskaxdu.
Dhibaatooyinka ay keento Magnesium I-threonate
Waxaa jira waxyeello aad u yar oo la og yahay ee Magnesium I-threonate oo ay ku jiraan hurdo, madax-xanuun, saxarada oo aan raaxo lahayn iyo lallabo. Saamayn aad u caadi ah oo loo yaqaanno kaalmada magnesium waa dheefshiidka nidaamka dheefshiidka. Si kastaba ha noqotee, iyadoo la adeegsanayo Magnesium I-threonate, waa inaysan dhicin maadaama loogu talagalay in si toos ah maskaxda loogu geliyo. Haddii aad qaadato daawooyin kale, waxaa lagugula talinayaa inaad la tashato takhtarkaaga ama GP -ga wixii talo fiican ah. Magnesium laguma talinayo dadka qaba xanuunnada kalyaha maaddaama kuwani ay inta badan ka soo saaraan magnesium jirkaaga.
Su'aasha dhabta ahi waxay tahay-haddii Magnesium I-threonate lala qaato magnesium kale supplements? Haddii aad u qaadato magnesium arrimaha dheefshiidka, isku day inaad qaadato Magnesium I-threonate. Haddii aad bilowdo inaad dareento calool -fadhi ama saxaro dabacsan, waxay noqon doontaa mid caqli -gal ah inaad dib ugu laabato magnesium kaligeed. Magnesium l-threonate oo leh kafeyn waxay kor u qaadi kartaa garashada iyo waxqabadka jireed laakiin marka la isku haleeyo, waxay keeni kartaa in jidhku dib ugu laabto daal, waxqabad maskaxeed oo liita, iyo xanaaq haddii aan si joogto ah loo qaadan. Tani waa sababta isbeddelka ba'an ee niyadda dadka qaarkood iyo danayn la'aanta iyo xamaasadda ay u leeyihiin inay sameeyaan dhaqdhaqaaqyo jireed. Su'aal kale oo inta badan la isweydiiyo ayaa ah intee in le'eg ayay qaadan doontaa ilaa aad ka ogaato isbeddelka dhabta ah? Khubarada caafimaadku waxay ku talinayaan in la sugo ugu yaraan 4 illaa 8 toddobaad ka hor intaadan qorigaaga ridin!
Yaa aan qaadan Magnesium l-threonate?
Dadka qaba dhibaatooyinka wadnaha
Dadka leh BP sare oo aan la xakamayn (≥ 140/90 mmHg)
Dadka qaba xanuunka dhimirka ee u baahan in isbitaal la dhigo sannadkii la soo dhaafay
Dadka qaba naafonimo/cudurrada kalyaha ama beerka
Dadka qaba sonkorowga Nooca I
Dadka qaba cudurka tayroodh aan degganayn
Dadka qaba cilladda difaaca sida Fayraska Difaac -La'aanta Aadanaha/ Cudurka Dhiman -La'aanta La -Qabsaday
Dadka ku hawlan daroogada ama khamriga laba iyo tobankii bilood ee la soo dhaafay
Dadka la ildaran nabarro carotid, lacune la xaqiijiyay, weerarada ischemic ku -meel -gaadhka ah iyo cudur sambabada oo muhiim ah
Dadka qaba xaalad xun
Dadka qaba xaalado halka kaabistu ay ka dhalan karto iska -horimaad si loo baaro sawir -qaadista sawir -qaadista positron emission tomography (PET), oo ay ku jiraan istaroog ama wadno -qabad lixdii bilood ee la soo dhaafay ama aan awoodin inay jiifsadaan hal saac
Dadka ku jira dawooyinka la mamnuucay in lala qaato kaabsamyada dheeraadka ah sida kuwa dhiigga khafiifiya iyo antibiyootigyada.
Dadka xasaasiyad ama xasaasiyad ka qaba walxo kasta oo loo isticmaalo kaabista
Dumarka uurka leh, nuujinaya, ama qorsheynaya inay uuraystaan ​​waa inay la tashadaan dhakhtar ka hor inta aysan qaadan kabitaankan
Doorashada kaabista saxda ah: Dib-u-eegista Magnesium l-threonate
Dadka la ildaran cilado hurdo iyo feejignaan la’aan ayaa adeegsata kaabiskan-Magnesium l-threonate oo ay ka buuxaan Fiitamiin-C threonate maxaa yeelay waxay ka dhigtaa mid sare u qaadista bioavailability marka la barbardhigo kaalmada kale ee Magnesium l-threonate. Kaabistu waxay awood u leedahay inay ka gudubto caqabad-maskaxeedka dhiigga oo siisa magnesium ku filan maskaxda waxayna kor u qaadaa awooda garashada. Marka la isku daro magnesium iyo tanine iyo macdanaha kale ee muhiimka ah, jirka waxaa la siin karaa baahi nafaqo oo maalinle ah iyada oo aan la yarayn fitamiinnada iyo macdanaha kale.
Magnesium l-threonate waxay hagaajisaa xusuusta qofka waayeelka ah ee ka weyn 50 jir oo la ildaran asaasaqa, cudurka Parkinson ama calaamadaha neerfaha ee daciifka ah.
Isticmaalka maalinlaha ah ee kabitaanku wuxuu hagaajiyaa xusuusta, wuxuu kor u qaadaa awoodda garashada iyo barashada qiyaastii siddeed iyo toban boqolkiiba muddo soddon ilaa lixdan maalmood ah. Waxay ku abuurtaa murqaha nasasho iyo nasasho waxayna siisaa xoojin jireed iyo garasho oo degdeg ah.
Dadka qaarkood waxay u arkaan inay ku habboon tahay inay kabkaan ku qaataan qaab kiniin ah maaddaama uu jiro gelatin daboolaya kiniinnada oo dhexdhexaad ah, si sahlan loo liqi karo oo si sahlan loo dheefshiido. Kiniiniyada ku dahaaran gelatin ayaa sunta ka saarta habka dheef -shiidka
Maadada threonate ee dheeraadka ah waxay baabi'isaa daalka jireed iyo garasho, waxay kor u qaadeysaa hurdada iyadoo nasinaysa jirka. Hurdada wanaagsan waxay ka caawisaa ka hortagga cilladda lugta aan xasilloonayn (xaalad keenta rabitaan aan la xakamayn karin si aad u dhaqaajiso lugahaaga) iyo riyooyin qafiif ah.
Markii kabitaankii la qaatay in ka badan soddon maalmood, waxay xoojisay diiradda iyo yareynta ceeryaanta maskaxda iyo sare u qaadidda kartida garashada taas oo keentay in diiradda la kordhiyo iyo waxsoosaar badan inta lagu jiro shaqada, marka la akhrinayo, la baranayo ama la samaynayo waxqabad kasta oo jireed.
Kaalmada dheeraadka ah waa in lagu qaataa cunto ama ka hor intaadan seexan. RDA waa saddex illaa afar kaabsool maalin kasta oo ay weheliso cuntooyinka, laakiin waxaa la isticmaali karaa cuntada ka dib sidoo kale marka hababka dheef -shiidka ay aad u firfircoon yihiin waqtigan, oo bixiya natiijooyin degdeg ah.
Kaabistu waxay leedahay waxyeellooyin yar. Midka xun waxaa ka mid ah calool xanuun iyo kuwa khafiifka ah waa madax xanuun ama lulmo. Markaa, waxaa la dhihi karaa Magnesium l-threonate waa mid gebi ahaanba ammaan ah in maalin walba loo qaato kaabis iyada oo aan lahayn waxyeellooyin xun.
Xagee ka iibsan kartaa Magnesium l-threonate?
Nasiib wanaag, soo-saareyaal badan, iibiyeyaal iyo sumado ayaa iibiya kabka layaabka leh-Magnesium I-threonate. Waxaa si sahlan looga heli karaa intarneedka midna uma baahna inuu ku dhibtoodo inuu iibsado. Si kastaba ha ahaatee, hal shay waa inaad maanka ku haysaa in ugu raqiisan aysan ugu fiicnayn. Had iyo jeer raadso sumadda ugu fiican, tafaariiqle iyo sumcad -bixiye lagu kalsoonaan karo iyo soo -saare, mid ka mid ah oo hannaanka wax -soo -saarkiisa iyo keydintiisa la xaqiijiyay
Budada Magnesium l-threonate Australia
Australia gudaheeda, kaabista waxaa lagu heli karaa labadaba budo iyo kaabsal. Badeecada waxaa loo heli karaa sida-Neuro-Mag Magnesium l-threonate Powder
Xaqiiqooyin Dheeraad ah oo ku saabsan badeecada
U adeegidda Cabbirka 1 qaaddo (qiyaastii. 3.11 garaam)
Adeegyada Kontaynarrada ku dhawaad ​​30
Hal adeeg oo dheeri ah (Neuro-Mag® Magnesium l-threonate) wuxuu bixiyaa 2,000 miligram oo magnesium l-threonate, taas oo u turjumaysa 144 miligram oo ah Mg hoose oo aad u nuugi kara. Maskaxdu waxay si fudud u nuugtaa kaalmada caafimaadka maskaxda oo la wanaajiyo iyo garashada dhalinyarada. Dheeraadku wuxuu caawiyaa joogtaynta isku xirnaanta synaptic ee u dhexeeya unugyada maskaxda wuxuuna kor u qaadaa dariiqyada calaamadaha unugyada maskaxda ee caafimaadka qaba. Waa dhadhan, feero miro kuleyl ah oo isku dhafan cabbitaanka budada ah.
Citric acid, acacia xanjo, maltodextrin, dhadhan dabiici ah, soosaarka stevia, silica.
Magnesium l-threonate budada Kanada
Kanada gudaheeda, kaabista ayaa loo heli karaa sidii-Naka Platinum Magnesium l-threonate
Xaqiiqooyin dheeri ah oo ku saabsan badeecada
Naka Pro's Pro MG12 Magnesium l -threonate oo laga heli karo Canada oo dheeri ah ayaa lagu muujiyey inay tahay qaabka kaliya ee magnesium ee kordhin kara heerarka magnesium maskaxda. Ka kooban 144 milligram oo Mg ah iyo 2000 miligram oo magnesium l-threonate PRO MG12 ayaa laga yaabaa inay maskaxda ka ilaaliso hoos u dhaca xusuusta waxayna hagaajin kartaa astaamaha hore ee cudurka Alzheimers.
Tirada halkii adeeg
Waxyaabaha ay ka kooban tahay-Qiyaas kasta oo 3 kaabsal ah waxaa ku jira Magnesium l-threonate 2000 miligram (144 milligram oo ah Mg element)
Maaddooyinka aan dawada ahayn
Microcrystalline cellulose, magnesium stearate (isha qudaarta), hypromellose (walax kaabsal ah)., Kuma jiro MAYA lagu daray gluten, lowska, ukunta, waxyaabaha caanaha laga sameeyo, kalluunka ama kalluunka qolofta, badeecooyinka xoolaha, galleyda, midabada macmalka ah ama dhadhanka, qamadi ama khamiir.,
Budada Magnesium l-threonate Boqortooyada Ingiriiska
Boqortooyada Midowday, kaabista waxaa lagu heli karaa labadaba budo iyo kaabsal. Waa isla badeecadii laga heli jiray Australia.
Si adag u xir meel qabow oo qalalan
Magnesium I-threonate-tallaabada xigta
Magnesium waxay muhiim u tahay caafimaadka jirka iyo ladnaanta maskaxda. Muhiimadda daweynta dhabta ah ee caafimaadka maskaxda ee magnesium waxaa weeciyay karti -darrideeda inay dhex gasho lakabka difaaca maskaxda. Magnesium I-threonate waxay awood u leedahay inay tan la qabsato iyadoo toos u galeysa gobollada maskaxda ee la rabo. Maaddaama dadka intooda badani ay la ildaran yihiin garashada garashada oo ay ugu wacan tahay la'aanta magnesium ee jirkooda, waxaa hubaal ah inay mudan tahay in tallaal la siiyo budada Magnesium I-threonate si kor loogu qaado awoodda maskaxda si ay ula qabsato dhibaatada.
Macluumaadka la bixiyay wuxuu ku salaysan yahay agab cilmi baaris iyo natiijooyin. Tani ma aysan ansixin FDA mana loogu talagalin in lagu garto, lagu daaweeyo ama looga hortago xanuun ama dhibaatooyin caafimaad.
Marka la eego in Maamulka Cuntada & Dawooyinka uusan u nidaamineynin kaabisyada si la mid ah maadaama ay qiimeyso oo la socoto daawooyinka, qofku wuxuu u baahan yahay inuu raadsado sumcado ay xaqiijiyeen dhinacyo saddexaad, sida NSF International (tijaabo alaab Mareykan ah, kormeer iyo urur shahaado), Labdoor, ama Shaybaarrada Qoreyaasha, si loo helo badbaado iyo tayo.
Ugu dambayn laakiin ugu yaraan, tixgeli inaad iska ilaaliso kaabisyada ay ku jiraan wax kasta oo macmal ah, sida midabada macmalka ah, dhadhanka iyo waxyaalaha ilaaliya.
Xu T, Li D, Zhou X, Ouyang HD, Zhou LJ, Zhou H, Zhang HM, Wei XH, Liu G, Liu XG. Codsiga Afka ah ee Magnesium-L-Threonate Attenuates Vincristine oo ay keentay Allodynia iyo Hyperalgesia by Caadiga ah ee Tumor Necrosis Factor-α / Nuclear Factor-κB Saxiix. Suuxinta jirka. 2017 Jun; 126 (6): 1151-1168. doi: 10.1097 / ALN.0000000000001601. PubMed PMID: 28306698.
Wang J, Liu Y, Zhou LJ, Wu Y, Li F, Shen KF, Pang RP, Wei XH, Li YY, Liu XG. Magnesium L-threonate wuxuu ka hortagaa oo dib u soo celiyaa cilladaha xusuusta ee la xidhiidha xanuunka 'neuropathic pain' byhibition of TNF-α. Dhakhtarka Xanuunka. 2013-Sep-Oct; 16 (5): E563-75. PubMed PMID: 24077207.
Mickley GA, Hoxha N, Luchsinger JL, Rogers MM, Wiles NR. Cuntada muddada dheer ee magnesium-L-threonate ayaa xawaareynaya waxayna yareysaa soo kicinta lafdhabarta ah ee kacsanaanta xaalada dhadhanka leh. Farmacol Biochem Behav. 2013 Mee; 106: 16-26. doi: 10.1016 / j.pbb.2013.02.019. Epub 2013 Mar 6. PubMed PMID: 23474371; PubMed Central PMCID: PMC3668337.